ABAPHANGI PHAMBI KWENARCOS MEXICO IXESHA LESIBINI LEENDABA EZIZAYO, EZINOKWENZEKA - IINKQUBO ZETV
I-Narcos Mexico yaphuma ngo-Novemba ka-2018 kwaye yalandela iminyhadala yeMexico yeMfazwe yeziyobisi eyenzeka ngo-1980
Narcos Mexico uphume ngo-Novemba ka-2018 kwaye walandela iminyhadala yeMexico yeMfazwe yeziyobisi eyenzeka ngo-1980. Umboniso unexesha elinye kunye neziqendu ezilishumi, kunye nexesha lokubaleka elimalunga nemizuzu engama-45-69. Olu luhlu kukuqalisa kwakhona kwe-2015 yeNarcos yasekuqaleni yeNarcos. INarcos Mexico sele ifumene uxabiso olukhulu kubalandeli kunye nabagxeki. Inenqanaba le-IMDb le-8.4 kunye nenqaku le-88% kwiitamatisi ezibolileyo.
Nantsi yonke into oyaziyo malunga nexesha elizayo leNarcos Mexico, kubandakanya ukubekwa kwayo, iyelenqe kunye nomhla wokukhutshwa.
Izakukhupha nini kwaye phi?
Ixesha lokuqala laphuma ngo-Novemba 16, 2018. Nge-5 kaDisemba ngo-2018, iNetflix yahlaziya umboniso wexesha lesibini. Ixesha lesibini liya kubetha iNetflix ngoFebruwari 13, 2020. Njengexesha lokuqala, ixesha lesibini liya kuba neziqendu ezilishumi. Kwi-2015, iNarcos Mexico iseti epheleleyo yoluhlu lwangempela lweNetflix yeNarcos. UNarcos ucinga ukuba namaxesha amane onyaka , kodwa iNetflix yenza izibhengezo ukuba bazakuliseta ngokutsha ixesha lesine ngokudlala ngokutsha. Yaba lixesha lokuqala leNarcos, eMexico.
Ngubani oza kuphinda enze indima yakhe, kwaye ngoobani ubuso obutsha?
UDiego Luna uza kubuya njengoMiguel Ángel Félix Gallardo kwaye ke noScoot McNairy njengoWalt Breslin. Amanye amalungu afakiweyo abandakanya uJosé María Yazpik njengoAmado Carrillo Fuentes, uFermín Martínez njengo-El Azul, uAlejandro Edda njengoJoaquín ‘El Chapo’ Guzmán, noAlfonso Dosal njengoBenjamín Arellano Félix. USosie Bacon, Jesús Ochoa kunye noMark Kubr bonke bazimisele ukujoyina abadlali njengoMimi Webb Miller, uJuan Nepomuceno Guerra kunye noTony ngokwahlukeneyo. Ngaphaya koko, bambalwa abalinganiswa abavela kwiNarcos kufuneka babonakale kwisizini ezayo. UScoot McNairy uya kuqhubeka nendima yakhe yombalisi ngeli xesha lonyaka. UAndrés Baiz, u-Amat Escalante kunye noMarcela Said bazakudlala indima kubalawuli beziqendu ezahlukeneyo zeli xesha.
Lithini eli bali ukuza kuthi ga ngoku, kwaye liyintoni iyelenqe lonyaka 2?
Umboniso usekwe kwimfazwe yeziyobisi yaseMexico yango-1980 kwaye isekwe kwiziganeko zokwenyani. Umboniso umalunga ne-arhente ye-DEA esuka eCalifornia iye eMexico kunye nenkosikazi yakhe nonyana. Ngokukhawuleza uyabuqonda ubungozi bokuthatha eyona nqwelo inkulu eMexico. Kungekudala kwenzeka uthotho lweziganeko ezibuhlungu, eziphazamisa urhwebo lweziyobisi kunye nemfazwe yeziyobisi, eza kuqhubeka iminyaka.
Ekupheleni kwexesha lokuqala, i-DEA ifumana umzimba kaKiki Camarena, owangcungcuthekiswa kwaye wabulawa. Okwangoku, uFelikis uceba ukubuyisa ubunkokheli bakhe ngelixa egxotha u-Isabella emfanekisweni. UNeto ubanjelwe ukungcatsha uFeliksi, kwaye i-DEA iqala ukusebenza kweLeyenda eMexico ukuze iphelise iGuadalajara Cartel, kube kanye.
Ixesha lesibini liza kulandela ii-Agents ze-DEA zithatha inqwelomoya ukubuyela kubo ngokubulala uKiki. Okwangoku, uFeliksi uza kuqala ukuphakamisa ubukhosi bakhe kwakhona. Ixesha liza kusisondeza kwimbali yeMfazwe yaseMexico yeziyobisi. Itreyila yesizini yesibini ikhutshiwe ngoku.
Ixesha lesibini liya kuphuma ngoFebruwari 2020; kude kube lelo xesha, qiniseka ukubukela ixesha lokuqala kwaye uyonwabele. Kwakhona, hlala uqhagamshele ukuze uhlale uhlaziywa nazo zonke iindaba ezinomdla kunye nolwazi malunga nomzi mveliso wokuzonwabisa.
Ixesha elingenazintloni 7 umhla we-netflix
spider-man: kumhla wokukhutshwa kwesigcawu-2
Ixesha lobukumkani 3 isiqendu 1
tsiba isitrato 23 umhla wokukhutshwa
Ngaba ixesha lesithathu le-rick kunye ne-morty malibe kwi-hulu
ubuso / ukucinywa 2